ICadastre, ichazwe kwinguqu eyaziwayo - i-Geofumadas
ICadastre, ichazwe kwinguqu eyaziwayo
Meyi, 2012 cadastre, Ukulanda
Le ngenye yeempapasho zokugqibela apho kufuneka ndisebenze khona. Ingcaciso ecacisayo ukuba nangona yenziwe yimixholo, inokuba luncedo kwamanye amazwe kuloo msebenzi obunzima wokuchaza i-cadastre kwinguqu abantu -ngaphezulu okanye ngaphantsi- ziqonde
Olu xwebhu inamaphepha 16 asebenza kakuhle kunye kwimeko woopopayi eyenza umxube umdla Ilustrator ngepeni eqhelekileyo yaye ekugqibeleni Adobe Photoshop ukugqithisa umyalezo ukuba nangona ilenze kunye amathuba igcine injongo yokuqala. Mandivume ukuba artist mkhulu, ucinga ntoni utshintsho ibandakanya ucela umsebenzi enjengale niqonde elishicilelwe phantsi ethe nje into Ndakhe ndasebenza nangona kuye kwakho ukungaboni ngasonye ukuba zincitshiswe waneliswa ekugcineni yanyatheliswa.
Intambo eqhelekileyo yenziwe ngengxoxo phakathi kwabaphathi bebhodi yabaphathiswa abafuna i-dolophu kwaye baqala ngokubuza ukuba irhafu eqokelelweyo isetyenziswa njani. I-dolophu iyakuvuyela ukucacisa indlela ukuqokelela irhafu yepropati isistim somasipala esibangela injongo yintsimi ngokuzimela kuphela kwizigqibo kodwa nokuxhomekeke kuncinci kwurhulumente ophakathi. Emva koko uchaza into malunga neenkqubo zangaphakathi zikamasipala kunye nokuba bonke abemi banyanzelekile ukuba bafake inxaxheba baze bathathe inxaxheba kwiindawo zokubonisana, kunye nokubaluleka ukuba oko kuhlawulwa kubuyiselwa kwimisebenzi.
Isahluko sesibini sichaza ngokufutshane indlela i-cadastre isebenza ngayo. Ukuba indlela uxwebhu elifutshane cadastre yezemali, waba ephololoza malunga nomlinganiselo zisisiseko kwaye lujolise kugxininiswa ngakumbi lwentsebenzo ezidolophini nasemaphandleni, kunye umzekelo ekubaleni yerhafu isebenza njani. Kakade ke, ngokomongo kwilizwe apho uwe kum ukuphuhlisa lo msebenzi apho mthetho yangoku (kwi indlela entsha) ukwaxhobisa isiphelo lwamaxabiso cadastral nabantu kwiminyaka aphela ngo-zero anantlanu.
Kwinqanaba lokugqibela sibheka ezinye iinkalo ezincedo ukuba i-cadastre eninzi ivelise kwimigaqo-nkqubo yokusetyenziswa komhlaba kunye nokukhuselwa komthetho. Kucacile ukuba lo mbhalo unomxholo, ilizwe kunye neprojekthi apho isicelo sokuqala sibheka imali; qi niseka ukuba bekusemthethweni okanye kwentlalo-mgaqo umyalelo wezahluko ezimbini zokuqala zazahluka.
Amava ayenomdla, kuba ukucaciswa kwamanye amaxwebhu kulula ukulungelelanisa iphepha kunye namaphepha ekhontenti yobugcisa. Kwakhona kulula ukuzithethelela ukuba oku kunjalo, banikwe ukugxeka abo bathi ukuqonda kwaye ndiyacinga ukuba geomatics loo ubuchule bokusebenzisa amagama okunyusa ego yethu; akukho nto embi kuba kungekudala okanye emva koko kufuneka wenze isikhala sokuziqhayisa :). Kodwa kulo mzekelo, xa injongo kukunxibelelana, ukugxekwa ukusuka umfundi non-specialist ithi oko ikuthethayo, kuyaqondakala, hayi kakuhle, ayilandeleki, ebanzi kakhulu, yamagcisa na ubuso elinamandla, ukulingana ngokwesini, ibala ihembe, kubonakala ngathi uDanilo Lemuz ... mfutshane, ukufunda konke.
Ndixhoma le ngxelo apha, kuba ngaphandle kweikopi ezimbalwa ezishicilelweyo, ezi zixhobo kufuneka zifumaneke kuluntu oluzifunayo, njengenxalenye yesimo esingenakuguquka kwidemokhrasi yolwazi. Amaxesha amaninzi kufuneka usebenze ukubonisa kwaye ufuna imifanekiso enemifanekiso ... into endiyakholelwayo le ncwadi iya kuthetha ityala elibalulekileyo.
Ngokuqinisekileyo kwamanye amazwe ungayifumana iluncedo ngakumbi.
Post edlulileyo«Edlulileyo Izixhobo ze-3 ze-WordPress zifanelekile ukutyala
Post Next Inkqubo ye-Global Positioning System njengeprojekthi yezobugcisaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "I-Cadastre, ichazwe kwinguqu eyaziwayo"
Olu xwebhu lunamakhredithi kwiphepha lesibini le-pdf, ukuba ngaba utsho ukuthini.
Inqaku elikhuthaza umxholo, umbhali weGeofumadas.
UBANI UKUBHALA NGOKUBHALA